A Proposal of the Rules of Procedure of the ASEAN Interngovernmental Commission on Human Rights (Burmese Version)
asd fjiudia lkdjlfkdslkflsdkmfsd
A Proposal of the Rules of Procedure of the ASEAN ...
Blind Democracy and Burmese Junta
88GS Statement on Internatio​nal Day of Democracy-burmese
Analysis Human Right Education
Universal Declaration of Human Right in Burmese
ဇိုမီးကျောင်းသားများအသင်း၊တက္ကသိုလ်များ-မြန်မာပြည် ၏ ၂၀၁၂ တွီးထန်ရွာ သဘောထားကြေငြာ စာတမ်း
Burmese Articles - 41
KD - 2015 Calendar
မာတင်လူသာကင်း အိပ်မက်နှင့် ကျွန်တော်၏ အိပ်မက်
DVB Constitutional Article (59)
atmufyg vkyfykdifcGifhrsm;ESifh vkyfxHk;vkyfenf;rsm;t&
tajccHvGwfvyfcGifhrsm; wkd;wufap&efESifh umuG,fay;&ef?
aexkdifEkdifcGifhukd &&dScH pm; ap&ef?
tmqD,H.&nf&G,fcsufrsm;jzpfonfh a'owGif; wnf+idrfa&; ESifh
1-4? EkdifiHrsm;ESifh a'otwGif; 0daoovuQ%mrsm;&dSonfukd
,Ofaus;r_tajctaeESifh bmoma&;aemufcHrsm;ukd av;pm;+yD;
tcGifhta&;ESifh wm0ef&dSr_ ukd
a'otwGif; tajctaersm;ESifhvJ oifhavsmfaomvl@tcGifhta&;rsm;
1-5? vl@tcGifhta&;xGef;um;a&;ESifh umuG,fa&;wkd@twGuf
wnf&dSa&.pm.rkd.u vufrSwfa&.ukd 0ifa&mufpGufzufjcif.pmemr_Oya'rsm.csif.xkd.ferdwf wnf&dSr_ESifh trsKd.rkd.aom rl0g' txl. aumfr&Sifonf atmufygrl0g'rsm.ojzifh atmufygtcsuf rsm.pmcsKyfrsm. xGef.rsm.tm.xkd. &&dScHpm.Oya'pkd.vHk.ukd tav.t=um.xm.r#wa&.vkdufempGm aqmif&GufoGm.a&.rS uif.yHk tajccHckdifrmaom tpkd.onfh=um.rS pnf.tpDtpOfrsm.wkd@tm.ESifh 'Drkdua&pDusifhpOfrsm.ESifh zGJ@pnf.rsm./ tkyfcsKyfr_pepfaumif. teufxm.wnfvkyfaqmifoGm.um.. OD.HyÉd^m%f (csmwm).0daoovuQ%mrsm./ bmompum.ukd av.uG.rnf jzpfonf? 2-1? tmqD..wlnDr#r_/ e. av.ukd av.twkdif.&dS rwlnDaom./ =oZmv$rf.vGwfI EkdifiHwcktaejzifh wnf&dSEkdifcGifh&dSa&.rsm./ vl@tcGifhta&.vmapa&.rnf? (C) w&m.ukd av.a&.jcif.u vufrSwfa&.r_rsm.yg vl@tcGifhta&.a=unmpmwrf.nDnGwfr_tay: wlnDonfh wefzkd.rnf jzpfonf? (u) tmqD./ (q) rwluGJjym.yrf.a&.oGm. ay:xGef.ESifh t=uyfukdifr_ rsm.ESifh umuG. jynfwGif.ifema=unmcsufESifh vkyfief.r_rsm.aom tjynfjynf qkdif&m vlom.fa&./ (p) ukvor*~csmwmESifh tmqD.HtzGJ@ 0ifEkdifiHrsm.wufatmif vkyfaqmifoGm.&ef? .fr_rsm.r_rsm. vGwfvyfr_/ tcsKyftjcmwnfwHhckdif+rJr_/ wef.a&.&rsm.pm.rnf? (i) tajccHvGwfvyfcGifhrsm. xGef.pHcsdef pHnGef. ESifh vlr_w&m. r&dSap&? (*) tzGJ@0ifEkdifiHwkdif. tykd'f (2)wGif azmfjyxm.Ekdifatmif vkyfaqmif&ef? 2? rl0g'rsm.um./ AD.rnf? (c) tmqD.1-6? vl@tcGifhta&.pm.aom EkdifiHwum vl@tcGifhta&.pm.HtzGJ@0ifEkdifiHrsm.xm.pm. +yD.xm. wkd.oGm.tygt0if EkdifiHwumOya'rsm.taejzifh jynfy0ifa&mufpGufzufr_rsm.tjyif tmqD.Hjynfolrsm.Ofaus. ESifh .udk } udK.HtzGJ@0ifEkdifiHrsm. tmqD.HtzGJ@0ifEkdifiHrsm.ukd av.om.a&.oGm.Hk=unfukd.
onf vlom.2-2? vl@tcGifhta&.pDqufqHjcif.jcif.ukd av.pDqufqHjcif.rsm.I r&jcif.rsm./ wckESifhwck cGJjcm.pm.ukd a&Smif&Sm. rsm.ukd av.toGifjyKjcif.jcif.ESifh wOD.cs. wrsKd./ "rR"dXmefusjcif.ESifh oufqkdifjcif.I wOD.pm.toGifjyKjcif.ESifh wOD.pm. wrsKd.I wOD.ESifh tajccHvGwfvyfcGifhrsm. tm.faejcif.ESifh EkdifiHa&.ukd av.oabmw&m. ponfhtcsufrsm.jzpfaom vl@tcGifhta&.ESifh EkdifiHa&.fr_ rjyKjcif./ oD.oef@a&G.rsm.vHk./ cGJjcm.r_ uif./ wckESifh wcktjyeftvSefqufpyfrSDwG./ xkd@tjyif rsufESmrvkdufjcif.onf? ၂-၃။ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့် အအနခြွခွခံ လလတတ်လ ခပပ်ခွ ငင့်န်မ နျားကကက လထွနငးကားရနငှနှ ငင င့် ကာလကယယ်ရ နင အဓက က ရကှမှုမှာအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများ၏ တာဝနငဖြစင အကြာငငးအသက အမှ တငပြပု သညင။ ၂-၄။ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးများကကက လထွနငးကားအနအာင တ်လုပငအဆာငယ်ရှာနှ ငင င့် ကာလကယယ်ရာလတငင အကကျနပုးနပြပု နပြပီးထွက ပကုပ်တိ ကယ်ရ ငက င်ဆိုင်မှုမရကှအနသာ ချွဥငးကပ်မှုများနဖြငင င့် လက ပငအဆာခင င်သွားရနင ၂-၅။ အာဆပီ ယခံအနဒသအလတငငးလလူ့ အခခွငင င့်အအရးစခံ များနှနှ ငင င့် စခံ ခွကျနခံန်စံညခနနငးများ တက နကးတကတ်လာအနစှနကကငင အနရးအလတကင တဆငင င့်ချွငငးတဆငင င့် တက ကးတကင အနပြာငငးလဖ အနအစသာ ချွဥငးကပ်မှု(Evolutionary approach) ကကက ချွမှတငအဆာခငယ်ရ ကယ်ရနင၊ (၃) အစစ စိုးရမမားအကြား တစ စို ငင်ပငငင်ခံအဆငင င့်ရစိုရှိ သေသာဌာန အနကာန်မ ရှင င်သွညင အစကကးရများနဖြငင င့်ဖဖ ခန့စညငးထွားသညင င့် ဌာနတခွကနဖြစငပြပီးအာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့အစညငး၏ အစက တတ်အပကကငငးတခွကအအနဖြငင င့် တညကယ်ရှသညင င့် အတက က ငင်ပငခံပ်ခွအဆငင င့်ရကှအနသာ ဌာနဖြစ င်သွညင။ (၄) လစ ပစိုင်ပုငငင်ခံ ငင င့်မမားသှသရှိငင င့် လစ ပငဆောငင်မှုမမား ၄-၁။ အာဆပီ ယခံရပငဝနငးတညငအဆာကင အရးနှနှ ငင င့်အတလူ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့် အအနခြွခွခံ လလတတ်လ ခပပ်ခွ ငင င့် များလထွနငးကားအနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အရးအလတကင နညငးဗဗျဟာများကကက အနဖာနငအဆာငင အရး၊ ၄-၂။ အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့အလတငငးရကှအနအနသာ အသဘာတလူ စာခွပျုပ်မနျားနှနှ ငင င့် လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့် ဆကန်စံ ပင အနအနသာ အခြွားစာခွပျုပန်စာံတမငးများမှ တဆငင င့် လလူ့ အခခွငင င့်အအရးဆက က ငယ်ရာ ပလူးအနပါငငးအနဆာခငယ်ရ က်မှုများ ကကက အနဖာနငအဆာငငှနကကင်မညင င့် အာဆပီ ယခံ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးအနကြညာစာတမငးတခွက အနပအ်ါပေါကတ်လာအနစရနင၊ ၄-၃။ အာဆပီ ယခံနပြညင်သွူများအကြား လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့်ပတင်သွ ကင၍ အသက အမြင်မ နျား တက ကးတကင လာအနအစရးကကက ပညာအနပးလက ပင နငးများ၊ သက အနတသနလက ပငခြွငငးများနှနှ ငင င့် သတငငးအချွကတ်အလကင များနဖြနင့အဝခြွငငးများနဖြငင င့် လက ပငအဆာငယ်ရ နင၊ ၄-၄။ အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများက အသဘာတလူ လက်မ တငအရးထွကှကးထွားအနသာ အပြညငပြညင ဆက က ငယ်ရာ .
လလူ့ အခခွငင င့်အအရးစာခွပျုပ်မနျားကကက ထွက အနရာလကန်စာံအအကာငတ်အထွညငအဖာနငှနကကငယ်ရန တ်အ လတကင ခစမငးရညငမြှ ငင င့်နခြွငငးများကကက တက ကးတကတ်လုပငအဆာခင င်သွားရနင၊ ၄-၅။ အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများအအနဖြငင င့် အပြညငပြညကင်ဆိုငယ်ရာလလူ့ အခခွငင င့်အအရးစာခွပျုပ်မနျားကကက လက်မ တငအရးထွကှကးလာအနစရနင အားအနပးမှုများ လက ပငအဆာခင င်သွားရနင၊ ၄-၆။ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့်သကကင်ဆိုင င်သွညင င့် အာဆပီ ယခံစာခွပျုပန်စာံတမငးများကကက အပြညင င့်အဝ အအကာငတ်အထွညငအပ်ါလောအနစရနတ်အ လတကင တက ကးနမြှ ငင င့်လက ပငအဆာခင င်သွားရနင၊ ၄-၇။ ပနငကြားအကလူ အညပီ အနတာငငးမှုများရကှလာပါက အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ရကှအခြွားဌာနများအား လလူ့ အခခွငင င့်အအရးဆက က ငယ်ရာ ပခံင့် ပကကးမှုများနှနှ ငင င့် အကလူ အညပီ များ ပခံင့် ပကကးအနပးရနင၊ ၄-၈။ အာဆပီ ယခံချွာတာ၏ အပကကဒင (၅) လတငင အနဖာနငပြထွားသညင င့်အတက က ငငး လလူ မှုအဖဖ ခန့အစညငးများနှနှ ငင င့် အခြွားသကကင်ဆိုင င်သွူများအပါအဝငင အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့အလတငငးရကှအခြွားဌာနများနှနှ ငင င့် အာဆပီ ယခှံနှ ငင င့် သကင်ဆိုနက င င်သွညင င့်အဖဖ ခန့များနှနှ ငင င့် အနလတ့ဆခံ နကအနလဆးအနှခနးတက က ငင်ပင်မှုများ လက ပငအဆာငယ်ရ နင၊ ၄-၉။ လလူ့ အခခွငင င့်အအရး လထွနငးကားအနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အရးလက ပင အဆာငင အအနသာ အခြွား နှနကကငခံငအနတာနင၊ အနဒသှနှ ငင င့် နှနကကငခံငတကာဌာနများ အဖဖ ခန့အစညငးများနှနှ ငင င့် သငင င့်အနလျာနင်သွလကက တက က ငင်ပင်မှုများလက ပင အနဆာငယ်ရ နင၊ ၄-၁ဝ။ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးလထွနငးကားအနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အရးနှနှ ငင င့်ပတင်သွ ကင်သွညင့်နင သတငငးအချွကင အလက်မ နျားကကက အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငင နှနကကငခံငများမှ ရယလူ ရနင၊ ၄-၁၁။ အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့၏ လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့်သကကင်ဆိုင င်သွညင င့် အနယဘလူ ယျချွဥငးကပ်မှုများနှနှ ငင င့် ရပပ်တိညပ်ခွ နျက်မနျား တက ကးတကတ်လာအနအာငင လက ပငအဆာငယ်ရ နင၊ ၄-၁၂။ အာဆပီ ယခံအနဒသအလတငငးရကှလလူ့ အခခွငင င့်အအရးဆက က ငယ်ရာ အအကြာငငးအရာများနှနှ ငင င့်ပတင်သွ ကင၍ အနလင့်လာမှုများကကက နပြင င်ဆိငယ်ရ နင၊ ၄-၁၃။အာဆပီ ယခံ နှနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးများ၏အစညငးအအဝးသကက့ အနကာန်မ ရှငင၏ တ်အ ပီ ရငခံ ပ်ခွ တငင ပြရနင သက က့ မဟကတင လက က အပ်မှုအရ တခင င်သွငငးရမညင င့် လက ပငအဆာင်မှုနှနှ ငင င့် ပတင်သွ ကင၍ နှနှ စန်စံဥစ အစပီ ရငခံ ပ်ခွ စာ များကကက အစပီ ရ ငငငပ်တိ ပြရနင၊ ၄-၁၄။ အာဆပီ ယခံ နှနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးများ၏ အစညငးအအဝးက လက က အပ င်သွလက က တာဝနငအပးသညင င့် အခြွားတာဝန်မနျားကကက ထွမငးအနဆာငယ်ရ နင၊ (၅) ဖဖငသ့စညငးပင သစ အဖဖ ခန့ဝင်မ နျား ၅-၁။ အနကာန်မ ရှငက င်ကို အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများနဖြငင င့် ဖဖ ခန့စညငးရမညင။ ၅-၂။ အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငတကကငငးသညင အနကာန်မ ရှခငပ်တိငင တာဝန န်ထမငးအနဆာငယ်ရ နင အစကကးရက အနခရးချွယပ်တိငငအနမြှာကင်သွ ညင င့် ကကကယန်စာံးလှ ယပ်တိဥပီးစပီ ကကက တာဝနပ်ခွနင့အပငှနကကင င်သွညင။ အရညည်အ ခမငငးမမား ၅-၃။ အနကာန်မ ရှခငပ်တိ ငာပ်တိ ဝန န်ထမငးအနဆာင်မ ညင င့် ကကကယန်စာံးလှ ယတ်အား ခွနင့အပယ်ရာလတငင အဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံင များအအနဖြငင င့် ကျားမလက ငနပ်တိ ငးတလူ ညပီ မှနျမှုနှနှ ငင င့် လလူ့ အခခွငင င့်အအရးနယင်ပ လယပ်တိ ငင ပါဝငင်ပ တင်သွက်မှုနှနှ ငင င့် ခစမငးအနဆာငငှနကကင်မှုတက က့ ကကက ထွညင င့်လသငငးစဥငးစားရမညင ။ ၅-၄။ အဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများသညင အနကာန်မ ရှခငပ်တိ င န်ထမငးအနဆာင်မ ညင င့်ကကကယန်စာံးလှ ယင်ကိ ကုခွနင့အပယ်ရာလတငင နှနကကငခံငအလတငငးရကှလက ပပ်န ညငးလက ပပ်န ညငးများ၏ လက က အပပ်ခွ နျကတ်အရ သငင င့်အနလျာနငအသာ သကကင်ဆိုင င်သွူများ နှနှ ငင င့် တက က ငင်ပင်မှုများ လက ပငအဆာင င်သွငင့် နင်သွညင။ ရင သစး၏ သကက်တ မငး .
၅-၅။ ကကကယန်စာံးလှ ယပ်တိ ကုငငးသညင သကပ်တိ မငး (၃) နှနှ စာပ်တိ ဝန န်ထမငးအနဆာခငပ်ခွ ငင င့်ရကှပြပီးသကပ်တိ မငး တကြက မငပြပီးပါက အနနာကန်ထ ပ င်ဆိကကပ်တိုကင်သွ ကပ်တိမငးတကြက မာင်သွ နပြန တ်လညပ်ခွ နင့အပခံ ပ်ခွ ပကကခငပ်ခွ ငင င့် ရကှသညင။ ၅-၆။ အပကကဒင ၅-၅ အပြငင ခွနင့အပ င်သွညင င့်အစကကးရသညင အအကြာငငးအရာကကက အနကြညာနခြွငငးမပြပု ဘဖ မက မကှနကကငခံင၏ ကကကယန်စာံးလှ ယင်ကိ ကုအစားထွက ကးလွှနဖ အနနပြာငငးနှနကကင င်သွညင။ တာဝနငဝတတ္တရားများ ၅-၇။ ကကကယန်စာံးလှ ယပ်တိ ကုငငးသညင တာဝနငဝတတ္တရားများကကက ထွမငးအနဆာငယ်ရာလတငင အာဆပီ ယခံချွာတာ နှနှ ငင င့် ၄ငငး၏လက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်တာဝနငအပးချွက်မနျားအတက က ငငး မျကငှနှာလက က ကငခြွငငးမရကှဘဖ ထွမငးအနဆာငယ်ရ မညင။ ၅-၈။ ကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျားသညင အနကာန်မ ရှငင၏ အစညငးအအဝးများကကက တကင အရာကယ်ရ နင တာဝနကယ်ရှသညင။ မလဖခနအမရှာင င်သွာအနသာ အအကြာငငးအနကြာငင င့် ကကကယန်စာံးလှ ယငဖြစ င်သွူမတကင အရာကငှနကကငင်ပါက သကကင်ဆိုငယ်ရာအစကကးရသညင အနကာန်မ ရှငင၏ ဥကက ဌကကက တရားဝအငတ်အကြာငငးကြား၍ ယာယပီ ကကကယန်စာံးလှ ယင်ကိ ကုကကကယန်စာံးနပြပု ခခွငင င့်အာဏာအပြညင့်နတ်အအဝပး၍ ကကကယန်စာံးနပြပု အနစှနကကင င်သွညင။ အနကာန်မ ရှငင ဥကက ဌ ၅-၉။ အနကာန်မ ရှငငဥကက ဌသညင အာဆပီ ယခံ၏ဥကက ဌတာဝနက င်ကို ထွမငးအနဆာငင အအနသာ အဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံင ၏ ကကကယန်စာံးလှ ယငဖြစယ်ရ မညင။ ၉-၁ဝ။ အနကာန်မ ရှငငဥကက ဌသညင ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများအရ အနအာကင်ပါအချွကင များကကက ကျငင င့်သခံ နကးလက ပငအဆာငယ်ရ မညင။ (က)အနကာန်မ ရှငင၏အစပီ ရငခံ ပ်ခွ စာကကက ဥပီးအနဆာငင ပြင င်ဆိငယ်ရ မညငဖြစငပြပီးထွက က အစပီ ရငခံ ပ်ခွ စာများကကက အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးလတငင တငင ပြရမညင။ (ခွ) အနကာန်မ ရှငငှနှ ငင င့် အခြွားသကကင်ဆိုင င်သွညင င့် အာဆပီ ယခံဌာနများအကြား အစညငးအအဝးများကကက အနကာန်မ ရှငင၏ ကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျားနှနှ ငင င့် ပလူးအနပါငငးနညနကှနှုနက ငငး၍ အနဆာခငယ်ရ ကယ်ရမညင။ (ဂ) အနကာန်မ ရှင င်ကိ တာဝနငအပးထွားသညင င့်အတက က ငငး လလူ့ အခခွငင င့်အအရး တက ကးတကင အရးနှနှ ငင့်နင ကာလကယင အနရးတက က့ှနှ ငင င့်သကကင်ဆိုင င်သွညင င့် အနဒသလတငငးနှနှ ငင င့် နှနကကငခံငတကာ အခွမငးအနားများကကကအနကာန်မ ရှငာတ်အးကကကယန်စာံးနပြပု ၍ တကင အရာကယ်ရ မညင။ (ဃ) ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများအရ အနကာန်မ ရှငင တာဝနငအပးသညင င့် အခြွား လက ပင နငးတာဝန်မနျားကကက ထွမငးအနဆာငယ်ရ မညင။ ရပက က ခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် ခွခံ စားခခွငင င့်သင င့် ၅-၁၁။ အာဆပီ ယခံချွာတာ၏ အပကကဒင (၁၉) အရ အနကာန်မ ရှငင၏ တရားဝင တ်လုပင နငးများလတငင ပါဝငင အနသာ ကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျားသညင ၄ငငးတက က့ လက ပင နငးများကကက အနဖာနငအဆာငငှနကကငယ်ရန တ်အ လတကင လက က အပငအသာ ရပကကခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် ခွခံ စားခခွငင င့်များကကက ခွခံ စားပကကခငပ်ခွ ငင င့်ရကှသညင။ (၆) လစ ပငဆောငင င်ပ သစနညငးလမငးမမား ဆခံ နကးနဖြတပ်ခွ နျကင ချွမှတငခြွငငး.
၆-၁။ အနကာန်မ ရှငင၏ ဆခံ နကးနဖြတပ်ခွ နျကပ်ခွနျမှတငခြွငငးသညင အာဆပီ ယခံချွာတာ၏ အပကကဒင ၂ဝ အရ တက က ငင်ပငင နညနကှနကှုငငးနခြွငငးနှနှ ငင င့် ဆ္ဒှအသဘာခွခံ ယလူ နခြွငငးနဖြစယ်ရ မညင။ အစညငးအအဝးအကြက အမတ်အရအလတကင ၆-၂။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင တှနှ စနျတ်လှငင နှနှ စငကြက မင ပခံ နကမှ နငအလတ့ဆခံ နကရမညင ။ ပခံ နကမှ နာတ်အးနဖြငင င့် အစညငးအအဝး တကြက မနျတ်လှငင (၅) ရကန်ထ က်မပကကအနစရ။ ၆-၃။ ထွက က ပခံနကမှ နစတ်အ ညငးအအဝးများကကနက အာဆပီ ယခံအအအလထွလထွအလတငငးအနရးမဗှးရခံ နကးနှနှ ငင င့် ဥကက ဌတာဝနင ယလူ ထွားအနသာ နှနကကငခံငတကက့လတငင တလှ ညင့်နပီန်စံ ကျငငးပရမညင။ ၆-၄။ လက က အပင်ပါက အနနာကန်ထ ပစ တ်အ ညငးအအဝးများကကက အာဆပီ ယခံအအအလထွလထွအလတငငးအနရးမဗှးရခံ နကး သက က့ မဟကတင ကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျားက ကျငငးပရအန င်သွဘာတလူ အနသာအနနရာလတငင ကျငငးပှနကကခငပ်ခွ ငင င့်ရကှသညင။ ၆-၅။ လက က အပင်ပါက အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးများသညင အနကာန်မ ရှငက င်ကို အနလတ့ဆခံ နကရနင အနစခွကကငငး နှနကကင င်သွညင။ အစပီ ရငခံ ပ်ခွ နခြွငငး၆-၆။ အနကာန်မ ရှငင နှနှ စင်ပတတ်လညတ်အ စပီ ရငခံ ပ်ခွ စှာနှ ငင င့် သငင င့်အနလျာနငအသာအခြွားအစပီ ရငခံ ပ်ခွ စာများကကက အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးဌာနအစညငးအအဝးသကက့ စဥငးစားဆငင ခြွငငှနကကငယ်ရနင တခင င်သွငငးရမညင။ အမမားသပြညည်သူအတတကင သတငငးသေပးသခြငငး၆-၇။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင မက မက၏ လက ပင နငးများနှနှ ငင င့် လက ပငအဆာင်မှုများအအကြာငငးကကက အနကာန်မ ရှင င်ကိ ထွက တငအဝသညင င့် သငင င့်အနလျာနငအသာ လလူ ထွက သတငငးအနပးမှုများမှ တဆငင င့် နပြညင်သွူလလူ ထွကထွခံ အခွကျနင မှ န်မနငှ အသက အနပးအနနရမညင။ အာဆဆီ ယငအတတငငးရစိုရှိ အခြားသေသာ လလူ့ အငခငင င့်အေရးဆစ စို ငင်ရာ ဌာနမမားသှသရှိငင င့် ဆတကည်သ ယင်မှု ၆-၈။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင အာဆပီ ယခံအနဒသအလတငငးရကှလလူ့ အခခွငင င့်အအရးလထွနငးကားအနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အနရးအလတကင လခံ နကးဝတာဝနကယ်ရအနသှာလလူ့ အခခွငင င့်အအရးဆက က ငယ်ရာဌာနဖြစည င်သွ င။ ၆-၉။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့အလတငငးလတငကယ်ရ အနသှာလလူ့ အခခွငင င့်အအရးနှနှ ငင င့်သကကင်ဆိုင င်သွညင င့် အခြွားကဏများဆက က ငယ်ရာဌာနများနှနှ ငင င့် မညင်သွုနက့ မညခံ င်ပ နကဆကန်စံ ပ တ်လု ပကုင်ကိ င်မ ညင်ကိ ကုဆခံ နကးနဖြတင၍ လက ပင အနဆာငယ်ရ မညင။ ထွက က့ အလတကင အကြာငင င့် အနကာန်မ ရှင င်သွညင အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့၏ လလူ့ အခခွငင င့်အအရး တက ကးတကင အနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အရးလက ပင နငးများလက ပင အဆာငယ်ရာလတငင ပလူးအနပါငငးလက ပငအဆာင်မှုများ တက ကးတကတ်လာအနစရနတ်အ လတကင ထွက က အဖဖ ခန့များ၊ဌာနများနှနှ ငင င့် နပီးစခပန်စာံတက က ငင်ပငငခြွငငး၊ ပလူးအနပါငငးအနဆာခငယ်ရ ကငခြွငငး၊ တက က ငင်ပင တ်လုပငအဆာငင ခြွငငးများ လက ပငအဆာငယ်ရ မညင။ (၇) အာဆဆီ ယငအေတေထွတေထွအေတတငငးသေရးမမရှိးခခမပငှသရှိငင င့် အေတေထွတေထွအေတတငငးသေရးမမရှိးရင သစးတစ စို့ ၏ .
အခနငးကဏ္ဍ ၇-၁။ အာဆပီ ယခံချွာတာ၏ အပကကဒင ၁၁-၂ (က)နှနှ ငင င့် (ခွ) အရ အအအလထွလထွအလတငငးအနရးမဗှးခွပျုပ င်သွညင သငင င့်အနတာနင်သွညင င့်အအကြာငငးအရာများကကက အနကာန်မ ရှင င်ကိ ထွညင င့်လသငငးစဥငးစားရနင တငင ပြှနကကင င်သွညင။ ထွက က သကက့လက ပငအဆာငယ်ရ န တ်အ လတကင အအအလထွလထွအလတငငးအနရးမဗှးခွပျုပ င်သွညင အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရး ဝနငကြပီးများကကက ထွက က အအကြာငငးအရာများကကက တခွကျန န်ထညငးမှာပငင တငင ပြအစပီ ရငခံ ပ်ခွ ရမညင။ ၇-၂။ အာဆပီ ယခံအအအလထွလထွအလတငငးအနရးမဗှးခွပျုပ င်သွညင အနကာန်မ တပီအအနဖြငင င့် ထွက အနရာလကန်စာံတာဝနင ထွမငးအနဆာငငှနကကငယ်ရန တ်အ လတကင လက က အပငအသာ ရခံ နကးလက ပင နငးအကလူ အညပီ များကကက အနထွာကခံ င်ပ င့်အနပးရမညင။ အာဆပီ ယခံအအအလထွလထွအလတငငးအနရးမဗှးခွပျုအပတ်အနဖြငင င့် အနကာန်မ ရှငာတ်အးကလူ ညပီ အနထွာကခံ င်ပ င့်အနပးနှနကကငယ်ရနင အလတကင အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများသညင မက မကှနကကငခံငမှ တာဝနကယ်ရသလှူများအား အာဆပီ ယခံအအအလထွလထွ အလတငငးအနရးမဗှးခွပျုပက င်ကို ဝကကငငးဝနငးပခံင့် ပကကးမှုများလက ပငအဆာငယ်ရ နင နညခနနငကြားနှနကကင င်သွညင။ (၈) အလစ ပည်အစဆီအစဥငှသရှိငင င့် ရင ပင သစသေငေငထွောကင င်ပ င့်မှုမမား ၈-၁။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးက အတညငပြပှုနကကငယ်ရနင အလတကင (၅) နှနှ စာင်ကိ လအလတငငးလက ပငအဆာင်မ ညင င့် အစပီ အစဉ်မနျားနှနှ ငင င့် လှုပယ်ရားမှုအစပှီအစဉ်မနျားကကက အနလင့်လာစခံ နကစမငးထွားအနသာ ဘတတ်ဂ နျတငှနှ ငင င့်အတလူ နပြင င်ဆိငင ၍ တခင င်သွငငးရမညင။ ထွက က တခင င်သွငငးမှုကကက အာဆပီ ယခံ၏ အမြဖ တမငးကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျားအနကာန်မ တပီက အနထွာကခံ ပ်ခွ ချွကငအပးရမညင။ ၈-၂။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင အထွလူးဥပီးစားအနပးလက ပငအဆာင်မ ညင င့် အစပီ အစဉ်မနျားနှနှ ငင င့် လှုပယ်ရားမှုမျှား အလတကင ဥ တ်ဂ နျတင်ကိ ကုနပြင င်ဆိ င ပ်တိ ခင င်သွငငးရမညင။ ထွက က တခင င်သွငငးမှုကကက အာဆပီ ယခံအမြဖ တမငး နှနှ စန်စံဥတ ကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျားအနကာန်မ တပီ၏ အနထွာကခံ ပ်ခွ ချွကငှနှ ငင င့်အတလူ အာဆပီ ယခံ နှနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးက ခခွငင င့်နပြပု ရမညင။ ဥ တ်ဂ နျတတ်အသခံ နကးစားရက တ်မနျားကကက အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများ၏ တလူ ညပီ ခစာခွဖ အခနဝ၍ ၈-၃။ ထွက ကှနှ စန်စံဥတ အနထွာကခံ င်ပ င့်အနပးရမညင။ ၈-၄။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင လက ပင နငးနပြင င်ဆိငပ်ခွ နျက်မနျားထွဖ မှ အပကကရခံပခံ နကအနခငလက က အပငအသာ အခွကျနပု့အစပီ အစဥင များအလတကင ရငငးနမြစ်မ နျားကကက အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများထွဖ မှ လကခံ ပ်ခွှနကကင င်သွညင။ ၈-၅။ အနကာန်မ ရှင င်သွညင အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများနှနှ ငင င့် အခြွားရငငးနမြစ်မ နျားမှ အနစတနာင့်ဝန န်ထမငး ပခံင့် ပကကးကလူ ညပီ သညင င့် အကလူ အညပီ များကကက ရခံ ပခံ နကအနခငအဖြစန်စုံအနဆာငငးနှနကကင င်သွညင။ ၈-၆။ အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငများထွခံ မှ မဟကတင်သွ ညင့်နင အခြွားအနသာ ရခံ ပခံ နကအနခငှနှ ငင င့် အနထွာကခံ င်ပ င့်မှုများ သညင လလူ့ အခခွငင င့်အအရးလထွနငးကားအနရး၊ ခစမငးရညငမြှ ငင င့်တငင အရးနှနှ ငင င့် ပညာအနပးလက ပင နငးများအလတကင သာ နဖြစယ်ရ မညင။ ၈-၇။ အနကာန်မ ရှင င်ကိသခံ နကးစဖအခနသာ ရခံ ပခံ နကအနခငများကကက အာဆပီ ယခံအဖဖ ခန့၏ ဘဏာအနရးဆက က ငယ်ရာ စညငးမျဥငး စညငးကမငးများနှနှ ငင င့်အညပီ စပီ မခံခွနင့ခွဖ ခန၍ သခံ နကးစဖ ခနရမညင။ .
၈-၈။ အနကာန်မ ရှငင၏ ရခံ နကးလက ပင နငးဆက က ငယ်ရာအနထွာကခံ င်ပ င့်ကလူညပီမှုများကကက အာဆပီ ယခံအအအလထွလထွ အလတငငးအနရးမဗှးခွပျုပခံယ်ရနကး၏ နှနှ စင်ပတတ်လညင လက ပင နငးအနဆာခငယ်ရ က်မှု ဘတတ်ဂ နျကခံန်ထမှ ကျခွခံရမညင။ (၉) အေတေထွတေထွှေသရှိငင င့် သေနာကင က်ဆံ သစးအေကြာငငးအရာမမား ၉-၁။ ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများသညင အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငး အအဝး၏ ခခွငင့် နငပြပု ချွကငဖြငင င့် အသကင ဝင တ်လာမညငဖြစ င်သွညင။ သပြင က်ဆံငင်မှုမမား ၉-၂။ မညင်သွ ညင င့်အဖဖ ခန့ဝငငှနကကငခံငမဆက က ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများကကက နပြင င်ဆိ ငက တ်လုပါက တရားဝငင ပနငကြားမှုကကက တခင င်သွငငးနှနကကင င်သွညင။ ၉-၃။ ထွက က သကက့ပြင င်ဆိငယ်ရ နင တရားဝငင်ပ နငကြားမှုကကက အာဆပီ ယခံ အမြဖ တမငးကကကယန်စာံးလှ ယ်မနျား အနကာန်မ တပီက အနကာန်မ ရှငငှနှ ငင င့်တက က ငင်ပငင၍ ထွညင င့်လသငငးစဥငးစားနှနကကင င်သွညင ။ ထွက က့ အနာကင အာဆပီ ယခံ နှနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးထွခံ အတညငပြပု ရနင တငင ပြရမညင။ ၉-၄။ ထွက က နပြင င်ဆိင်မှုသညင အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးများအစညငးအအဝးက အတညငပြပု လက က ကင်ပါက အသကင ဝင တ်လာမညငဖြစည င်သွ င။ ၉-၅။ ထွက က နပြင င်ဆိင်မှုများသညင ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင့်နင လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများလတငင ယခွင င်ကိ ပါဝငဖပ်ခွ င့် အနသာ သက က့ မဟကတင နပြင င်ဆိင်မှုလက ပငအဆာငဖပ်ခွ င့်အနသာ အခွကျနထွ တ်အ က ပါဝငင အအနသာ အခခွငင င့်အအရးများ၊ တာဝနကယ်ရမှုမျှားနှနှ ငင င့် အနလသဖယ်မှုမရကှအနစရ။ သပြနန်လညင ည်သ သစးသပင်မှုမမား ၉-၆။ ယခွကယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင့်နင လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးကကက အသကင ဝင တ်လာသညင င့်အခွကျနငအနာကကင်ပုငငး(၅) နှနှ ခစပ်တိငင ကနဥပီးနပြန တ်လညခံ င်သွ နကးသပ်မှုများ လက ပငအဆာငယ်ရ မညင။ ထွက က သကက့ပြန တ်လညခံ င်သွ နကးသပငခြွငငးနှနှ ငင င့် အနနာကင်ဆိ ကပ်တိ ဖ ခနသခံ နကးသပ်မှုများကကက အာဆပီ ယခံအနဒသအလတငငးလလူ့ အခခွငင င့်အအရးလထွနငးကားအနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အရးကက က ပကကမကကအနကာငငးခမနငအအစသာ အမြင်မ နျက နပုးနဖြငင င့် အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးက တာဝန န်ယူလက ပငအဆာငယ်ရ မညင။ ၉-၇။ ထွက က နညငးတလူ ခစာ အနကာန်မ ရှင င်သွညင မက မကလကပင နငးများအအပါ်ေ သခံ နကးသပ်မှုများလက ပငအဆာငင ပြပီးအာဆပီ ယခံချွာတှာနှ ငင င့် ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်၊ လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများ၏ မလူ ဝါဒများနှနှ ငင င့် ရလညယ်ရ ယပ်ခွနျကင များနှနှ ငင င့်အညပီ အာဆပီ ယခံအနဒသအလတငငးလလူ့ အခခွငင င့်အအရးလထွနငးကားအနရးနှနှ ငင င့် ကာလကယင အရးတက က့ှနှ ငင င့် ပတင်သွ ကင၍လက ပငအဆာင်မ ညင်ဆိ ကုပါက မညကင်သွု့လက ပငအဆာင င်သွငင င့်အနကြာငငးအကြခံ အနပးချွက်မနျားအား အာဆပီ ယခှံနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးသကက့ တခင င်သွငငးရမညင။ အဓစို ပ္ပာတယယ်ဖွ ငင င့်ဆစ စို သခြငငး.
၉-၈။ ယခွကလက ပကင်ပုခငပ်ခွ ငင င့်ှနှ ငင င့် လက ပခံ န်ထနကးလက ပပ်န ညငးများနှနှ ငင င့် ပတင်သွ ကင၍ အဓက ပ္ပာလယယ်ဖွ ငင င့်ဆက က ချွက်မနျား မတလူ ကဖ ခနနပြားမှုများရကှပြပီးအနနဖြရှငငး၍မရှနကကငင်ပါက ထွက က ကကစ္စကကက ဆခံ နကးနဖြတပ်ခွ နျကငအပးနှနကကငယ်ရန တ်အ လတကင အာဆပီ ယခံ နှနကကငခံငနခြွားအနရးဝနငကြပီးအစညငးအအဝးသကက့ လွှနဖ အနနပြာငငးအနပးရသညင။ .
Documents Similar To A Proposal of the Rules of Procedure of the ASEAN Interngovernmental Commission on Human Rights (Burmese Version)
Ko Lu Aye
Ko Aung Hmaing